Madaxweynaha: “Mar kale ayaan saaxiibadeena Turkiga dib ugu soo dhoweyneynaa Soomaaliya” SAWIRRO – Radio Muqdisho
Madaxweynaha: “Mar kale ayaan saaxiibadeena Turkiga dib ugu soo dhoweyneynaa Soomaaliya” SAWIRRO
25 January 2015, Muqdisho: Madaxweynaha Jamhuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta dalka ku soo dhoweeyay Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdoğan.
Waxaa uu Madaxweyne Xasan Sheekh uu si weyn uga mahadceliyey doorka weyn ee dowladda iyo shacabka Turkiga ka geysanayaan gargaarka iyo horumarinta Soomaaliya, isagoo sidoo kalena qirey sida Turkiga ay uga go’an tahay taageerada Soomaaliya , xitaa xilliyada ay khatarta jirto.
“Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan dib dalka Soomaaliya ugu soo dhoweeyo Madaxweyne Erdoğan . Saaxiibtinimada Turkiga iyo Soomaaliya waa mid qoto dheer, laga soo bilaabo qarnigii 16aad, xilligaas oo uu jirey xiriir ka dhexeeya boqortooyadii Cusmaaniyiinta iyo Saldanadii Adel ee Soomaaliya.
“Maantadan la joogo, dowladda Turkiga waxa ay si cabsi la’aan ah u muujineysey sida ay uga go’an tahay taageerada horumar Soomaalia ay iska leedahay oo dalkeena laga hirgeliyo. Turkiga ma sugin in xaaladda ay isbedesho ama soo hagaagto si ay maalgashi u sameeyaan, balse maalgashigooda waxaa uu gacan ka geystey in la abuuro xaalado wanaagsan keenaya xasilooni iyo kobac dhaqaale. Saaxiibtinimada iyo taageerada Turkiga u muujisey Soomaaliya waa arin abid si weyn loo xusi doono,’’ ayuu yiri madaxweynaha.
Dowladda Turkiga, oo kaashaneysa Dowladdda Federaalka Soomaaliya, waxay Soomaaliya ka bilaabeen mashaariix horumarineed oo kala duwan iyo kuwo la xiriira kaabeyaasha dhaqaalaha. Mashaariicdaas waxay isugu jiraan kuwa caafimaadka, daryeelka nadaafadda, dhismaha isbitaallada, dhismaha wadddooyinka iyo dayactirka garoonka diyaaradaha Caalamiga ee Aadan Caddde. Waxaa iyana dib loo dhisey masaajiddo horey ugu burburey dagaalkii sokeeye, waqtigan la joogana waxaa jira Soomaali badan oo wax ku barata Turkiga.
Maanta, Madaxweyne Maxamuud iyo Madaxweyne Erdoğan waxay fureen terminalka cusub ee garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde, Xarunta Isbitalka Waxbarashada Caafimaadka iyo Cilmibaarista. Wadahadalada labada dhinac maanta Muqdisho ku dhexmarey ayaa diiradda lagu saarey xoojinta iskaashiga labada dal ee Soomaaliya iyo Turkiga, gaar ahaan dhinacyada dhaqaalaha, arrimaha bulshada iyo nabadgelyada. Waxaa labada dhinac ay kala saxiixdeen heshiisyo taabanaya dhinacyada iskaashiga milateriga iyo amniga, dhanka dhalinyarada iyo cayaaraha, gaadiidka baddda, taageerada booliska iyo iskaashi cusub oo dhexmara Raadiyaha iyo Televshishanka Qaranka ee Turkiga iyo Televishanka Qaranka Soomaaliyeed ee SNTV.
“Waxan Turkiga uga mahadcelinayaa gacanta ay inaga siineyso dhinacyada dhaqaalaha, militariga, arrrimaha bulshada, iskaashiga kaabeyaasha dhaqaalaha iyo gargaarka aadamiga. Shacabka Soomaaliyeed abaal weyn ayay u hayaan saaxiibtinimada kala dhexeeya Turkiga, waxaana rajeynayaa inuu sii xoogeysto xiriirka labadeena dal,” ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Madaxweyne Erdogan oo Muqdisho soo gaarey, mashaariicna furey “SAWIRRO”
Marwo Qamar Cali Cumar oo la kulantay dhigeeda Emine Erdoğan “SAWIRRO”
Marwo Qamar Cali Cumar oo la kulantay dhigeeda Emine Erdoğan "SAWIRRO"